Iimpawu kunye nokukhangelwa kwamanqaku kumxholo:blockchain
UDoj uhlawulisa ilizwe laseLatvia ngendima kwi trickbot ye -wareware scam
Isebe lezobuLungisa e-US namhlanje lityhola ilizwe laseLatvia ngendima yalo etyholwa ngumbutho wamazwe aphesheya owaphula umthetho waseka ikhomputha engalunganga ebizwa ngokuba yi "Trickbot" ngelizama ukuqhatha abathengi, amashishini kunye neminye imibutho. U-Alla Witte (aka Max) oneminyaka engama-5
Iingqungquthela ezingama-44% kuluhlu lwe-binance, ukuthengisa i-bitcoin kunye ne-ether
I-NU, ithokheni yokusetyenziswa kwemveli yeNuCypher, inyuke nge-44% kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo emva kokudweliswa kwi-Binance cryptocurrency exchange. Emva kwesibhengezo, ingqekembe yabetha iiyure ezingama-24 eziphakamileyo zeedola eziyi-0.51, inzuzo yosuku olunye engama-37.60% Ngexesha apho i
Izikhundla ezivulekileyo kwikamva esekwe kwi-cme yehla kwiinyanga ezi-5.5
Imali iyonke eyabelwe "umgangatho" wekhontrakthi yexesha elizayo kwiChicago Mercantile Exchange (CME) yehle yaphantse yaba ziinyanga ezintandathu ngoLwesithathu, ibonisa ukwehla kwemisebenzi yeziko. isikhundla-siwele kwi-1.36 yezigidigidi zeedola, eyona iphantsi ukusukela nge-16 kaDisemba, ngokweeda
I-Coinbase yenza ukuba i-dogecoin ifumaneke kubatyali-mali abathengisa
Abasebenzisi beCoinbase abathengisayo ngoku bangathengisa, bathenge kwaye bagcine ii-dogecoins kwi-stock exchange, itsho inkampani kwiposti yebhlog. Ukuvelisa inzala, uCoinbase uqhuba inyuselo yeedocoin eyi- $ 1.2 yezigidi. UCoinbase usungule ulwazi lwe-dogecoin kumaphepha ewebhu kunye necandelo eli
Iankile yokubonelela ngemali mboleko exhaswa ngapha nangapha nge-bankprov
Ibhanki yedipozithi i-Anchorage Digital iyayandisa inkonzo yayo yokubolekisa ngemali mboleko exhaswa yi-BankProv, ibhanki eseMassachusetts esekwe ngaphambili eyayibizwa ngokuba yiProvident Bank. mboleko zebakala kwi-ethereum yabo.